Tung Ming-Chin sy ireo hazo kantony mahafinaritra miaraka amin'ny sary sokitra | Famoronana an-tserasera
Sary sokitra hazo nataon'i Tung Ming-Chin izay toa misy olona ao anatiny
Indraindray isika dia gaga amin'ny fahakingan-tsaina sy ny sain'ny mpanakanto sasany. Mitranga amintsika izany ireo sary sokitra vita amin'ny hazo an'i Tung Ming-Chin, mpanakanto Taiwaney afaka mamela anao gaga amin'ny asany kanto sasany.
Ny tanjony dia hatrizay milalaova amin'ny fihetsem-po tsy takatry ny saina sy anaty an'ny olona Lalindalina kokoa. Tsy te-hamela olona tsy miraika izy ary ny asany dia mahavita mandentika antsika amin'ny fihetseham-po mahery vaika amin'ny fahitana voalohany ireo sary sokitra vita amin'ny hazo.
Ary tsy miraharaha ny hazo lehibe sy ireo sary sokitra ireo izany dia manome ny fahatsapana fa misy olona voafandrika ao anatiny. Ny hevitra fototra dia ny fanehoana ny tena hevitry ny fonja ara-tsaina.
Ary azonao tsara izany fanangonana tafiditra ao amin'ny psyche olombelona ary amin'ny fanovana ny habaka ara-batana ho iray amin'ireo atitany ara-tsaina, araka ny tenin'i Ming-Chin tenany ihany.
Ny sasany amin'ireo sary sokitra vita vinavinaina anaty boaty misy tanana na tongotra mivoaka hiala amin'ny fahatsapana fa migadra. Hazo voasokitra izay ahitanao ny ampahany amin'ny hozatra ary na ny hazondamosin'olom-bolo aza.
Ming-Chin dia mitafy jade cong sy jade bi ary izany dia tandindon'ny kolotsaina sinoa taloha. Sary sokitra namboarina tamin'ny fomba iray ka naseho azy ireo tamin'ny fomba prismatika hanehoana ny fandehan'ny fotoana. Ny ampahany afenina afovoany dia misy ny fivoarana sy ny fisaintsainana ny kianja sy ny endrika.
Un mpanakanto teraka tany Changhua, Taiwan ary izay efa nahazo ny mari-pahaizana maîtrise avy amin'ny National Taipei University of the Arts. Vatan-kazo izay maneho grande Hsu Tung Han sy ny endriny toratelo.
Mandao anao izahay ny tranokalanao so it afaka manaraka ny asany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sary sokitra hazo nataon'i Tung Ming-Chin izay toa misy olona ao anatiny
Ity no endrika fanavaozana ny fampiharana Spotify hanasongadinana ireo podcast
Amin'ny kapoka borosy haingana maromaro hanaovana sary hoso-doko an'ny vorona